Puntland oo soo bandhigtay 3 rag ah oo ka tirsan Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo soo bandhigtay 3 rag ah oo ka tirsan Alshabaab
12th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso kusoo bandhigay 3 nin oo ay sheegeen iney ka tirsanaayeen Alshabaab, gaar ahaan qeybta buuralleyda Golls.
Magacyada ragga lasoo bandhigay ayaa magacyadooda lagu kla sheegay Mukhtaar C/nuur oo ku magac dheer Axmad Guray, taliyihii Al-Shabaab ee buuraha Golis, C/waaxid Cali Kamaa-diid iyo Guuleed Bashiir.
Taliyaha ciidanka booliska Puntland, Maxamad Saciid Jaqanaf oo saxaafadda kula hadlay gudaha saldhiga booliska ayaa sheegay in magaalada laga sameeyey hawlgal ballaaran oo lagu sugayey amniga, iyadoo la soo qab-qabtay dad fara badan, qaarkoodna la sii daayey baaritaano lagu sameeyey kadib halka kuwa kalena weli ay ku socdaan baaritaan.
Mid ka mid ah 3-da nin ee lasoo bandhigay oo lagu magacaabo Axmad Guray oo la hadlay warfidiyeenada ayaa sheegay xilligii la soo qabanayey in uu isaga baxay Shabaab, isla markaana ciidanka Puntland ay ka soo qabteen magaalada Garowe.
“Waxaan ku biiray Shabaab markii meesha laga saaray xoogagii Maxaakiimta ilaa xilagaasi waan ka mid ahaa, waxaana ahaa taliyaha ciidanka ee aaga buuraha Caalmadaw” ayuu hadalkiisa ku daray Mukhtaar C/nuur.
Xalay ayaa booliska Puntland baaritaan xoog leh ka sameeyeen magaalada Boosaaso, iyagoo soo qabtay ilaa 200 dhallinyaro ah, kuwaasoo qaarkood lasii daayey.
Jawaari: Gacanta dowladda hallagu soo celiyo furaha taleefoonnada Soomaaliya ee 252
Faragelin milateri oo lagu sameeyo Liibiya oo laga shaki qabo